အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့် ပုဂ္ဂိုလ် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မျိုးနှင? - Yangon Media Group
ငွေကြေး ခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေအရ
ပြည်သူပိုင် သိမ်းလို့ ရပါတယ်”
ရွှေနှင့်ဒေါ်လာငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်း ဈေးကစားနေသည့် လက်ကြီးသမားအချို့ကို အထူးစုံစမ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနက ခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ပုဂ္ဂိုလ် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မျိုးကို ဒီမိုကရေစီတူဒေးက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်များကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
မေး – အခုလက်ရှိ ရွှေ၊ ဒေါ်လာ အရောင်းအဝယ်ကို ပုံမှန်ထက် ကျော်လွန် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေတဲ့ လက်ကြီးသမားတွေကို အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနက ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ သိချင်လို့ပါ။ ခေါ်ယူစစ်ဆေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပြင်ပဈေးကွက်တွေ ရပ်ဆိုင်ပြီး ရှောင်တိမ်းနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဈေးကစားတဲ့သူ ရာချီရှိနေတဲ့ အနက်က ဘယ်နှဦးလောက် ခေါ်ယူ စစ်ဆေးထားပါသလဲခင်ဗျ။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိ စစ်ဆေးဆဲဆိုတော့ အရေအတွက် အတိအကျတော့ ပြောလို့ မရသေးပါဘူး။ သက်ဆိုင်တာ မသက်ဆိုင်တာ အဲဒါလေးတော့ ရှိတာပေါ့။
မေး – စစ်ဆေးတဲ့ အထဲမှာ တကယ်လို့ သူတို့က ဈေးကွက်ကို ကမောက်ကမဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူလို့ရပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ – ဥပဒေဆိုတာကတော့ စစ်ဆေး ပေါ်ပေါက်တဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကျွန်တော်တို့က တည်ဆဲ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်က သွားရမှာပေါ့။ ဥပဒေအတိအကျကတော့ ပြောလို့ မရသေးပါဘူး၊ တည်ဆဲ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နဲ့ တော့ ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး – ဈေးကစားနေတဲ့ သူတွေက အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ လက်ရှိစစ်ဆေးနေတဲ့သူတွေ အပြင် ထပ်ဖော် ထုတ်စစ်ဆေးဖို့ရော ရှိပါသလား ခင်ဗျ။
ဖြေ – လိုအပ်တဲ့သူ မှန်သမျှတော့ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မေး – စစ်ဆေးဖော်ထုတ်မှု ရလဒ်တွေကိုရော ပြည်သူတွေကို ချပြဖို့ ရှိပါသလား ခင်ဗျ။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့က တာဝန်ပေးတဲ့သူတွေကို ဆက်လက်တင်ပြဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ တာဝန်ပေးတဲ့သူတွေက ဆက်လက်ပြီးတော့ သူတို့သင့်တော်သလို ဆောင်ရွက်သွားပါလိမ့်မယ် ။
မေး – စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဈေးတွေကလည်း ပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ ဆရာတို့ ဘယ်လိုမှတ်ချက်လေးပေးချင်ပါသလဲ။
ဖြေ – စီးပွားရေး သဘောတရားကတော့ လူတွေရဲ့သဘောက အမြတ်ရမယ်ဆိုရင် လုပ်ကြတာပေါ့နော်။ လုပ်တဲ့နေရာမှာ နည်းနည်းလေးပိုပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ်ကို နည်းနည်းလေး ကမောက်ကမဖြစ်အောင် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒီလောက်ထိဖြစ်အောင် လုပ်တယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းများသွားတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်သလား။ ဟုတ်လား မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာ ကျွန်တော်တို့က စိစစ်တာပေါ့။ စိစစ်မေးမြန်းတဲ့ သဘောလေးဆောင်ရွက်နေတာပါ။ အားလုံးပြီးသွားမှ သေချာလေးပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်။
မေး – နောက်တစ်ချက်က တချို့က စွပ်စွဲပြောဆိုနေတာ ရှိပါတယ်။ ဘဏ်အချို့က ဝန်ထမ်းတချို့လည်း ပါဝင်ပတ်သတ်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတော့ အဲဒီအပေါ်မှာရော စုံစမ်းမှုတွေလုပ်နေပါသလား။
ဖြေ – ဒါကတော့ သူတို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့ သဘောမျိုး ဆန်မလား မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ စိစစ်တဲ့အပိုင်းကတော့ တကယ့် Main ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျော်စောပြီးတော့ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒါမျိုးတွေကိုပဲ ခေါ်ယူပြီးစိစစ်မှာပါ။
မေး – စစ်ဆေးဖော်ထုတ် ရမိတဲ့အခါ သူတို့ငွေတွေက ဥပမာ ငွေမည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ပြည်သူပိုင်သိမ်းဖို့ ဆောင်ရွက်လို့ရပါသလား ခင်ဗျာ။
ဖြေ – ရပါတယ်။ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ကို တင်ပြပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာပါ။
– အခုလိုဖြေကြားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
မလေးရှားရှိ ချင်းဒုက္ခသည်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အဆင်ပြေစွာ ပြန်လာနိုင်ရေး အစိုးရထံ တောင်း??